प्रचण्डलाई पत्तै नदिइ ओलीले बोलाए आफूनिकट नेताहरूको गोप्य बैठक, नेकपाभित्र खैलाबैला, काे-को भए सहभागि ? — Sanchar Kendra
प्रचण्डलाई पत्तै नदिइ ओलीले बोलाए आफूनिकट नेताहरूको गोप्य बैठक, नेकपाभित्र खैलाबैला, काे-को भए सहभागि ?
कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले गुट उत्पादन गर्ने यस्ता संस्था तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्ने माग पनि गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएको साता दिनमै ओली पक्षधर नेताहरू नै बहुल सदस्य रहेको फाउन्डेसनमा ओली निकट नेताहरू जुटेर चार घण्टा लामो छलफल गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पार्टीमा अब गुट, उपगुट र पूर्वसमूह नरहेको बताएका थिए ।
यद्यपि दाहाल नेतृत्वको भैंसेपाटी भेला र त्यसको परिणामले आफ्नो समूहलाई झट्का लागेको महसुस गरेका ओलीले भने त्यसपछि अनौपचारिक छलफल भने गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलगत्तै आफूसँग असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग झन्डै चार घण्टा छलफल गरेका ओलीको संवादको शैलीसमेत रक्षात्मक बनिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा हेरिएका नेताहरू जुटेर पार्टीमा आफूहरूको उपस्थितिबारे समीक्षा र भाबी रणनीतिबारे परामर्श गरेका हुन् ।